सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ , तर यो सत्यता नै हो ! आमा बन्दै श्वेता खड्का ! – AB Sansar
September 23, 2020 September 23, 2020 adminLeaveaComment on सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ , तर यो सत्यता नै हो ! आमा बन्दै श्वेता खड्का !
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ , तर यो सत्यता नै हो ! आमा बन्दै श्वेता खड्का चलचित्र ‘कहाँ भेटिएला’ बाट नेपाली चलचित्रमा प्रवेश गरेकी अभिनेत्री श्वेता खड्काले नयाँ चलचित्रमा काम गर्ने भएकी छन। उनी अभिनीत चलचित्र ‘कान्छी’ दुई वर्षअघि प्रदर्शनमा आएको थियो। अहिले आफ्नो व्यापार व्यवसायमा ध्यान दिँदै आएकी उनी यम थापाको लेखन तथा निर्देशनमा बन्न लागेको नयाँ चलचित्रमा अनुबन्धित भएकी हुन्। * ***थप भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
कोरोना खाेपमा सफलता, असर सुनमा : आज एकै दिन यति धेरैले घट्यो सुनको मुल्य !